Al-Shabaab oo weeraray saldhig Ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Diif – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya deegaanka Diif ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ku lahaayeen deegaankaas.
Sida ay sheegayaan wararka dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidanka Kenya iyo Al-Shabaab ayaa markii dambe waxaa Al-Shabaab ugu suura gashay inay la wareegaan saldhigaas.
Wararka ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay dhowr jiho ka weerareen saldhigaas, waxaana ciidankii saldhigaas ku sugnaa markii dambe ay ka carareen.
Taliyaha Booliska Joseph Boinnet ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarka Al-Shabaab, ayna dib u celiyeen, balse ma sheegin khasaaraha dhankooda ka soo gaaray.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in deegaanka Diif ay ku qabsadeen saanad milateri, isla markaana ciidanka Kenya ay khasaare gaarsiiyeen.